Mr Ugly sues Apama over prizes – DailyNews
HARARE – William Masvinu, 43, who landed his third Mr Ugly contest crown in December before being dethroned for allegedly manhandling the pageant’s sponsor, has filed a police report in a bid to get the prize money he is still owed.
“After receiving only $100, I was surprised to hear that Apama was going around town saying ‘Masvinu should enjoy the money I gave him, he won’t get another cent from me.’
“Ndakazonzwa avekuti Masvinu akandibata collar. Asi hapana pandakamubata collar. Ndobva ndanzwa kuti Masvinu tamu bhana haachacontester for life. Asi kana vakadya mari ngavataure. (I was accused of manhandling the sponsor. Then the next thing I heard that I had been banned for life. But it was all an effort to cover up for the prize money that had been embezzled,” he said.
“This is not the first time Masvinu has engaged in violent activities at Mr Ugly. He once threatened another former sponsor — Devine Assignments director Biggie Chinoperekwei — over the same issue and for this reason we have to part ways with him,” Mr Ugly founder said then.